Apple သည် iOS 11 ၏ဒုတိယမြောက်အများပြည်သူသုံး beta ကိုစတင်ခဲ့သည် အိုင်ဖုန်းသတင်း
ဒီနေ့လည်ခင်း Apple သည်၎င်း၏မိုဘိုင်း operating system ၏ဒုတိယ version ဖြစ်သောဒုတိယ beta ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ပရိုဂရမ်တွင်ပါ ၀ င်သူများသာမက developer များသာမက၊ ဆောင်း ဦး ရာသီ၌တရားဝင်စတင်မကြေငြာမီတွင်စနစ်သစ်ကိုစမ်းသပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဤဒုတိယ iOS 11 beta သည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ရောက်ရှိလာသည် Apple သည်ပြီးခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်ကထုတ်လွှတ်ခဲ့ပြီးနောက်, နှင့်ယခုအပတ်အစောပိုင်းကဖြန့်ချိသော developer များအဘို့အတတိယပဏာမဗားရှင်းကိုက်ညီ။
ကျွန်ုပ်မှတ်ဉာဏ်ကိုအနည်းငယ်ပြန်လည်လန်းစေရန် iOS 11 သည်ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲမှုအချို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည် အထူးသဖြင့်သော့ခတ်မျက်နှာပြင်နှင့် ပတ်သက်၍ လုံးဝဒီဇိုင်းနှင့်စိတ်ကြိုက်အကြောင်းကြားစာစင်တာ.
app ကို ပို့စ်များကို အခုခွင့်ပြု လူတစ် ဦး ချင်းစီငွေပေးချေမှု Apple Pay ကို အသုံးပြု၍ မှတ်စု လက်စွဲစာအုပ်ရှာဖွေခြင်းနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်ရွေးစရာတစ်ခုအပါအ ၀ င်၊ Apple ကဂီတ ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြု ဖွင့်စရာစာရင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်းများနှင့်မျှဝေပါ။ အပြင်ယခု Siri ကို နည်းနည်းပိုပြီးစမတ်ကျပြီးသဘာဝဘာသာစကားပြောနိုင်ပုံရသည်။
ဟုတ်ပါတယ်, ငါတို့အကြောင်းကိုမေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး App အသစ် မှတ်တမ်းများ, Finder တစ်မျိုးသည် iPhone နှင့် iPad နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ local files များနှင့် iCloud နှင့်အခြား cloud service များ (DropBox, Box, Drive, OneDrive) နှစ်ခုလုံးတွင်သိမ်းဆည်းထားသောစီမံချက်များကိုခွင့်ပြုသည်။ တစ် ဦး လည်းရှိပါသည် iPad ပေါ်ရှိ Dock သစ်, အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်ရွေးချယ်ခြင်း (App Switcher)၊ အက်ပ်များအကြားဖိုင်များကိုဆွဲချချပါ အရာအထူးသတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည် multitasking...
လည်း အက်ပလီကေးရှင်းကိုပြန်လည်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည် အပြည့်အဝနှင့် iOS 11 ထဲတွင် ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများသည်နေရာလွတ်ယူကြသည်, မက်ဆေ့ခ်ျများကို iCloud တွင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်ဒေသခံသိုလှောင်မှုကိုပိုမိုထိရောက်စွာစီမံရန်အသစ်နှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောရွေးချယ်စရာများ.
Developer များအတွက်တတိယ beta iOS 11 ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည် အသစ်က TV ပေးသူအသစ်များ၊ Files အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်များ၊ အိုင်ပက်အတွက်အက်ပလီကေးရှင်း Switcher ပြောင်းခြင်းနှင့်အခြားအရာများစသည်တို့ကဲ့သို့သောအများပြည်သူ beta2တွင်လည်းပြသသင့်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် Apple ၏အများပြည်သူသုံး beta ပရိုဂရမ်တွင်စာရင်းသွင်းခံရပါက Settings → General → Software Update ကိုကြည့်ပါ iOS2Public Beta 11 သည်သင့်ကိုစောင့်နေသည်။ သင် sign up မလုပ်သေးပါကသင်လုပ်နိုင်သည် ဒီမှာ, သင်တို့သည်လည်း macOS နှင့် tvOS ၏အများပြည်သူ beta ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရပါလိမ့်မယ်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS 11 » Apple သည် iOS 11 ၏ဒုတိယမြောက်အများပြည်သူသုံး beta ကိုစတင်ခဲ့သည်
ကူညီကြပါ! ကျွန်ုပ်၏အများသုံး beta ကိုကျွန်ုပ်၏ ipad pro တွင်ကူးယူရန်အကြံပေးပါသလား။ အဲဒါကိုအသုံးမကျအောင်လုပ်ဖို့အမှားအများကြီးမရှိဘူးလား။
မေးခွန်း! ကျွန်ုပ်တွင် flash ဖြင့်ရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံများနှင့်ပြproblemsနာများရှိသည်၊ သူတို့သည်အလွန်မှောင်မိုက်လာတတ်သည် (မှောင်မိုက်သည့်နေရာများတွင်ပင်မီးမထိုးဘဲပိုကောင်းသည်) ။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ၎င်းသည်ကင်မရာနှင့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းကြားညှိနှိုင်းရမည့်ပြaနာဖြစ်သည်။ သင်ကသင်မီးထိုးနေစဉ်နောက်မှ (Flash ကိုလုံးဝပိတ်ထားပါက) ဖမ်းယူမှုကိုပြုလုပ်ပါ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ဤပြproblemနာကို IOS အသစ်ပြောင်းခြင်းနှင့်ဖြေရှင်းနိုင်သလားသို့မဟုတ်၎င်းနှင့်ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။
ဒီ beta ကကျွန်တော့် iphone6plus ကိုနှေးစေပြီးအရမ်းပူစေတယ်။ နောက်ဆုံးဗားရှင်းမှာပြproblemsနာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်
Podcast 8x40: ရာသီ ၈ သို့နှုတ်ဆက်သည်
Apple မူပိုင်ခွင့်သစ်အပြီးတွင် HomePod ၏ပါရမီကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်